London သတင်းစာတွေ (အထူးသဖြင့် Metro) ထဲမှာပါတဲ့ အလုပ်ပေးမည်၊ Training လည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်တွေ ဘယ်တော့မှ apply မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ ပတ်ချာလည် မူးအောင်ကို ရိုက်သွားမှာ။ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ဆီက သင်တန်းတွေ တက်ဖို့ပဲ ဆွဲဆောင်နေတာ။ ကိုယ်တောင် အင်တာဗျူးမှာတင် ပေါက်သွားလို့ တော်သေးတယ်။ အဲလိုမျိုးတွေက မြန်မာပြည်မှာတင် မဟုတ်ဘူးနော်။ သဘောပေါက်တယ်ဟုတ်။ နောက်ပြီး ကျောင်းသား status နဲ့ ရပ်တည်နေရတာလည်း သိပ်တော့ မဂွတ်တော့ဘူး။ ငါနော် ...
Labels: London photography
weikhine 3:46 am
i oso wan take part..in the contest!
if student is this good..wonder how great willdteacher's potosb:P
hoat te hoat?
CMS 10:06 pm
sure. thx for dropping by. if u want to join photo contest, pls reg native myanmar forum and join weekly photo contest :) have fun